म लोभी हुन थालेँ
भारतमा बढ्यो निसान म्याग्नाइट टर्बो भेरिएन्टको बढ्यो मूल्य
फैसलाको पुनरवलोकनमा जान दाहाल–नेपाललाई सुझाव
ऋषि कट्टेलले नेकपा पाउँदा ओलीपक्षीय विद्यार्थी खुशीयाली र दीप प्रज्वलन
न्याय माग्दै गौरहत्याकाण्ड पीडित !
निर्वाचन आयोगले एमाले र माओवादीका नेतालाई एकताका लागि बोलाउने, किराती र सन्ध्या तिवारीलाई विकल्प खोज्न आग्रह गर्ने
क्रिकेटका फ्यान !
१० मिनेटका लागि रोकिएको संसद् बैठक सूचना टाँस गरेर स्थगित
मध्यपूर्वका परिकारको रेस्टुरेन्ट खुल्यो
एपीएफको लगातार दोस्रो जित
निर्वाचन आयोग पुगेर दर्ता पनि भइसक्यो सर्वोच्चको फैसला
साहित्य र कला प्रतिक्रिया दिनुहोस्
बलिउड म लोभी हुन थालेँ
बाह्रखरी - शनिबार, फागुन ८, २०७७
बलिउड अभिनेत्री सारा अली खानले चलचित्र ‘केदारनाथ’बाट बलिउडमा डेब्यु गरेकी हुन् । सन् २०१८ देखि अर्थात् बलिउडमा प्रवेश गरेदेखि नै उनले दर्शकका लागि उत्साहजनक प्रोजेक्टस् (चलचित्र) हरू दिइरहेकी छन् । अभिनय यात्राको मात्र दुई वर्षको छोटो अवधिमा उनले रणवीर सिंह, सुशान्तसिंह राजपुत र वरुण धवनजस्ता अब्बल अभिनेताहरूसँग काम गरिसकेकी छन् ।
हालै अक्षयकुमार र धनुषसँग काम गरेको ‘अतरंगी रे’ पनि रिलिज भइसकेको छ । तर के सारा सोलो (एकल) फिल्मको नेतृत्व गर्न तयार भइसकेकी छन् ? सारा स्वयं यसो भन्छिन् :
चलचित्रमा उनको सोलो नेतृत्व
मलाई थाहा छैन । मलाई कसैले चलचित्रको कथा सुनाउँदा, त्यो कथा वा भनौं विषय दर्शकलाई सुनाउनुपर्छ जस्तो लाग्यो भने मैले गर्ने हो । चाहे त्यो कथा म एक्लैले सुनाइरहेको होस्, मेरो छोटो भूमिका होस् वा ठूलो । अन्ततः म एउटा राम्रो र सान्दर्भिक कथा भन्न चाहन्छु ।
मेरो अभिनय करियरमा, म आज कमर्सियल चलचित्र गर्छु, भोलि सिरियस र पर्सि सोलो फिल्म गर्छु भनेर कहिल्यै सोचिनँ । त्यसरी कहिले चल्दैन पनि । मेरा लागि मेरो काम भनेकै कथा भन्नु हो । मलाई भन्नुपर्छ भन्ने लागेको कथा दर्शकलाई सुनाउने हो । त्यसैले त्यो चलचित्रमा म सोलो वा म सानो भूमिकामा मात्रै छु कि भन्ने कुराले केही फरक पार्दैन ।
तर ‘अन्तरंगी रे’ पछि भने म लोभी हुन थालेँजस्तो मलाई लाग्छ । र मैले राम्रा कामहरू मात्रै गरूँ जस्तो लाग्न थालेको छ । यसको मतलब म एक्लैले मात्रै गर्छु भन्ने होइन ।
म केवल त्यस्तो भूमिका र पात्र मात्रै निभाउन चाहन्छु जुन मैले निभाउन सक्छु र जसका लागि म सक्षम पनि छु । म त्योभन्दा बढी त्यसलाई जटिल बनाउन चाहन्नँ ।
बक्स अफिस नम्बर
म हलका लागि कलाकार बनेको हुँ र हल नै मेरो प्रथम दर्शक हो । डिजिटल रिलिज हुनुको बेफाइदा भनेको, मेरो चलचित्र रिलिज भइरहँदा बक्स अफिस नम्बर चेक गर्न पाउँदिनँ र हलमा गएर नाच्न पाउँदिनँ ।
समय बुझ्न आवश्यक
कलाकार, मनोरञ्जनकर्ताका हिसाबले अहिलेको समयलाई बुझ्न जरुरी छ । पूरा विश्व नै आक्रान्त बनाइरहेको अहिलेको महामारीको अवस्थामा हाम्रो जिम्मेवारी र अहिलेको आवश्यकता भनेकै तपाईंलाई घरमै केही मनोरञ्जनात्मक र रमाइला खुराक पस्किने हो ।
मनोरञ्जनकर्ताका हिसाबले यदि छोटो समयका लागि भए पनि तपाईंको तनाव बिर्साएर हसाउन सक्नु नै हाम्रो काम र उद्देश्य हो । त्यसैले हलमा होस् वा घरमै, तपाईं आफ्नो पूरा परिवारसँग बसेर हाम्रो चलचित्र हेरेर खुसी हुनुस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो ।
शनिबार, फागुन ८, २०७७ मा प्रकाशित
#बलिउड र हलिउडका नायकको खोजी
#सारा अली खान
फरहान अभिनीत ‘तुफान’ डिजिटल प्लेटफर्ममा रिलिज हुँदै
मुम्बई । कोरोना महामारीकालमा धेरै चलचित्रमा डिजिटल प्लेटफर्ममा रिलिज भए । तर, स्थिति सामान्य हुन थालेसँगै निर्माताहरु पुनः हल रिलिजतर्फ... ११ घण्टा पहिले
जनकपुर साहित्य महोत्सव सम्पन्न
जनकपुरधाम । जनकपुर साहित्य महोत्सव शनिबार सकिएको छ । अन्तिम दिनको पहिलो सत्रमा 'कसले देला सुशासन ?' विषयमा बहस गरियो ।... शनिबार, फागुन २२, २०७७
साहित्य पुरस्कार डा. लम्साललाई
काठमाडौं । यस वर्षको महालक्ष्मी साहित्य पुरस्कार २०७७ बाट साहित्यकार तथा सञ्चारकर्मी डा. नवराज लम्साललाई पुरस्कृत गरिने भएको छ ।... शनिबार, फागुन २२, २०७७
बाबुराम भट्टराईदेखि मनीषा कोइराला एउटै मञ्चमा
काठमाडौं । फाइनप्रिन्टले गैंडाकोट नगरपालिकाको हर्कपुरमा उन्नती कल्चरल भिलेजमा फागुन २८ देखि २९ सम्म फाइनप्रिन्ट फिभर आयोजना गर्ने भएको छ... शनिबार, फागुन २२, २०७७
“घाम पानी बतासदेखि डर लाग्छ आमा भर लाग्दैन”
रामकुमार सुवेदी आमा तिमी त्यो हावा देख्दिनौ अरूले पनि देख्दैनन् आमा नदेखे पनि तिमीलाई मन पर्छ– जीवन हुन्छ भन्छौ हावाप्रति भरोसा छ आशा छ भन्छन् तर आमा म देख्छु हावा त्यो बतास... शनिबार, फागुन २२, २०७७
नारायण भट्टराईका दुई कविता
आधुनिक निरोको शासन–मन्त्र एउटा ध्वनि प्रतिरोधी विशाल बैठक कोठामा सत्ताधारी, ‘राष्ट्रियता र समृद्धिको सपना’ जादुमयी बहुचर्चित भजनका रचनाकार निरोवादी नेताजी चुनाव अंकित मुरली बजाएर आफ्ना कार्यकर्तालाई... शनिबार, फागुन २२, २०७७
सांसद्हरूको अग्निपरीक्षा !
बिहिबार, फागुन २०, २०७७
बेसुरको बरबराहट बिहिबार, फागुन २०, २०७७
भीम रावल भन्छन्- ‘ओलीले ह्‌विप जारी गरी समानुपातिक सांसदलाई निकाल्न सक्दैनन्’ सोमबार, फागुन १७, २०७७
संसद् बैठकको तयारीमा संसद सचिवालय सोमबार, फागुन १७, २०७७
चुनाव र पञ्चायती भूत
अमेरिका र चीनबीच युद्ध केले गराउला ?
अब मुद्दा हाल्ने पालो विपक्षीको
‘उच्च रक्तचाप भएका व्यक्तिमा मस्तिष्काघातको जोखिम’ शुक्रबार, फागुन १४, २०७७
अनैतिकलाई नैतिकताको मतलब हुँदो रहेनछ बुधबार, फागुन १२, २०७७
कोरोनाका कारण विदेशमा थप तीन नेपालीको मृत्यु
आईतबार, फागुन १६, २०७७
अष्ट्रेलियामा मनाइयो टोपी दिवस सोमबार, पुस २०, २०७७
विप्लवलाई काठमाडौं ल्याउन हेलिकोप्टर ‘स्ट्यान्डबाई’
अब स्याटेलाइटबाटै घर घरमा इन्टरनेट, टेलिकम र इन्टरनेट सेवा प्रदायक जोखिममा
प्रधानमन्त्री ओली भन्छन्- मेरो ज्यान तलमाथि हुनसक्छ !
बीए पास हुनुहुन्छ ? भन्सार एजेन्टको परीक्षा तयारी गर्नुस्
विश्व मृत्यु : २५,७१,७९४
संक्रमित : ११,५७,६९,०६९
नेपालमा गत २४ घण्टामा मृत्यु : ०
जम्मा मृत्यु : ३,०१०
निको भएका: ९,१४,७८,१७६
कूल संक्रमित: २,७४,६०८